DDR nke nwekwara anọchi abụọ data ọnụego bụ otu nke kasị mma na nke kasị elu na ebe nchekwa kaadị na ndidi na ahịa a ogologo oge ugbu a. N'ezie mbụ aha nke e nyere ka DDR bụ DDRSDRAM dị ka DDR mgbe niile na-adabere n'elu SDRAM na-arụ ọrụ. The afo anọchi Ugboro abụọ Data Rate Synchronous Dynamic Random Access ebe nchekwa. E nwere ọtụtụ iri puku ngwa nke DDR SDRAM na kasị nkịtị bụ ebe motherboard nke na kọmputa na elu ọgwụgwụ handsets na-mepụtara na nke a. E nwere ọtụtụ nsụgharị nke DDR ebe nchekwa dị ka DDR1, DDR2, DDR3 na DDR4 na ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọ bụla nke na ebe nchekwa kaadị na-azụ dakọtara na ndị ọzọ nke pụtara na DDR1 Ram ga-arụ ọrụ na motherboard na-akwado ka e mesịrị version na otu emetụta na elu DDR si.
Irrecoverable faịlụ site na DDR kaadị ebe nchekwa
The ebe nchekwa kaadị na nke a na-mepụtara na a ukwuu achịkwa gburugburu ebe obibi na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọkaibe ọrụ na-nyere ka ọrụ na DDR ebe nchekwa kaadị mere nwere a nnọọ nnukwu ahịa na nke a . Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na data mgbake na-mere si DDR ebe nchekwa kaadị ke a siri na ọkachamara n'ụzọ dị ka na kaadị ga-rụrụ arụ ma ọ bụrụ na kwesịrị ekwesị nhazi na-adịghị mere na nke a. Na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị ruru ka nke a onye ọrụ nwere ike ọ gaghị enwe ike ime ka n'aka na faịlụ na-natara:
1. Unprofessional njikwa
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị njọ na-akpata data ọnwụ na DDR Ram. The ohere mepere nke kaadị comprises nke obere atụdo na dị nnọọ siri na na omume nke na-agbake data onye ọrụ bụghị nanị na osịmde kaadị emerụ kamakwa jide n'aka na data mgbe Ewepụtara na iji omenala ụzọ ma ọ bụrụ na a na-eme mgbe ahụ onye ọrụ mkpa iji jide n'aka na ihe ọzọ dị elu technology na ọkachamara aka na-eji agbake data kpamkpam.
2. Exposure nke unforeseen ọnọdụ
Ọ na-agụnye ekpughepụru kpọmkwem ìhè ịrịba oge, mmiri mebiri ma ọ bụ anụ ahụ mmebi nke kaadị dị ka ndị a niile nwere ike na-ahuta ka unforeseen ọnọdụ. Na ìhè nke ndị a okwu na ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ agaghị enwe ike iji weghachite data ma nwekwara ike iduga na-adịgide adịgide ọnwụ nke ngwaike arụmọrụ nke kaadị.
3. Human njehie
E nwere ọtụtụ akpata pụrụ iduga a nke na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na mgbe kaadị bụ agụ ma ọ bụ ide data mgbe ahụ elekọta ma na precautionary jikoro na-e iji jide n'aka na ihe kasị mma na ọnọdụ ndị nyere. Kaadị ekwesịtụghị wetara nke oghere mgbe data a na-dere na ọtụtụ ihe ọ ga-eji mgbe batrị bụ ala ma ọ bụ na e nwere egwu mberede ike outage.
Weghachi gị DDR kaadị ebe nchekwa na nke kacha mma DDR kaadị ebe nchekwa Iweghachite Software
Wondershare Data Recovery Anọwo na ahịa ebe ọ bụ na ogologo na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ bụghị nanị ọkọkpọhi kasị mma ọrụ na nke a ma Wondershare nkwado otu na-emekwa ka n'aka na ọkaibe ọrụ na-nyere ka ọrụ n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Onye ọrụ dị nnọọ kwesịrị ịkwụ ụgwọ otu oge iji jide n'aka na ikike bụ zụrụ na ozugbo ọ e mere onye ọrụ nwere ike ugbu a na-ahụ na ihe bụ nsogbu kpebiri. The kensinammuo imewe na ọkaibe atụmatụ na-agbakwunyere n'ime usoro ihe omume na-ahụ na ndị kasị mma na-nyere na onye ọrụ ọkọkpọhi ọrụ na-na akara na chọrọ nke kaadị ma ọ bụ ngwaike si ebe data nlaghachie a chọrọ. Iji nweta nsonaazụ kacha mma ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị na-esonụ usoro na-etinyere mere na onye ọrụ ọkọkpọhi results na akara na ha chọrọ:
1. Onye ọrụ kwesịrị ịga leta URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html iji jide n'aka na ihe omume arụnyere kwesịrị ekwesị na ọ ga-mere site na isoro kpaliri na-egosi n'oge echichi na ndị a bụ jụụ mfe iso:
2. ịpị ọzọ button ga-ekpughe na-esote na ihuenyo ebe onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ụdị nke faịlụ na-akọwapụtaghị:
3. Ọzọ ịpị ọzọ button ga-ahụ na onye ọrụ na-akawanye ọhụrụ ihuenyo ebe na ọnọdụ nke faịlụ ọnwụ na-akọwapụtaghị maka usoro ihe omume na-arụ ọrụ ma na-achọta faịlụ na na ngalaba juputara:
4. The onye ọrụ nwere ike eme ka ahụ n'aka na faịlụ na-Ewepụtara na-juputara anya na ozugbo ọ e mere onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na ezi faịlụ na-pịrị ka họrọ ha na mgbe ahụ naghachi button na-enwe na-ihe mere:
Uru na ọghọm nke a DDR kaadị ebe nchekwa ojiji
DDR ebe nchekwa kaadị ndị kasị mma na nke kasị vasatail ụdị nchekwa na ngwaọrụ nke ọ bụghị nanị ọkọkpọhi kasị mma n'ihi n'ihi na onye ọrụ ma na-emekwa ka n'aka na data na-echebe tinyere ike n'ezi ihe. Otú ọ dị ka ọtụtụ ndị ngwaọrụ onye a nwere ya uru na ọghọm na maka otu ihe a na ngalaba nke nkuzi e nyere isiokwu ahụ.
1. The data ike n'ezi na-echebe mgbe DDR kaadị ebe nchekwa na-eji dị ka pinned ohere mepere bụ nnọọ ike ịgbawa.
2. The DDR kaadị ebe nchekwa na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nchekwa nke bụ pụrụ ịdabere na inogide.
3. The onye ọrụ nwere ike na-na-ejere ndị DDR kaadị ebe nchekwa na ala na-arụpụta pụrụ inweta enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge.
1. The kaadị ndị ochie gaferela na nkwado bụ ya mere dịkwa nnọọ elu ọgwụgwụ na nke a nke nwere ike na-ana elu mgbe ụfọdụ.
2. The kaadị a haziri ịnọgide na-ele elu ọgwụgwụ tech savvy ọrụ na ndị na-abụghị oru ọrụ ike na-eji kaadị na ala na afọ ojuju.
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Mfe nzọụkwụ ịrụ a DDR kaadị ebe nchekwa mgbake